အိမ်သာသုံးစက္ကူနဲ့ mask အတုပြုလုပ်ရောင်းချတာတဲ့ဗျာ ယုတ်မာလိုက်တာ။ Video
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု မြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ လူတွေဟာ ရောဂါကာကွယ်ဖို့ mask ကိုအလေးထားပြီး မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းအနေနဲ့ ဝယ်ယူလာကြပါတယ် ။ သို့ပေမဲ့လည်း အချို့သောစီးပွားရှင်များက ယခုလိုအချိန်မှာ လူတွေကိုလှည့်စားပြီး သူတို့ရဲ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်သာတွေးပြီး စီးပွားရှာလာခဲ့ကြပါတယ်။ အချို့သော ကုန်စုံဆို င်တွေက မတန်မဆဈေးတွေနဲ့ mask ကိုဈေးတင်ပြီး ရောင်းချနေကြတဲ့အချိန်မှာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့ နည်းစနစ်အသစ်နဲ့ […]
နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဟန်နီထွန်း စနိုက်ကျော်မင်းသမီးတစ်ယောက်ကို ဒဲ့ဖဲ့တာဗျာ
တစ်ချိန်က ဟန်နီထွန်းဆိုတာ နာမည်ရှိပြီးသား မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး သူမက ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေရော ၊ ဗီဒီယို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုပါ ရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူမကို ပရိသတ်အများစုက ဗီလိန်ဇာတ်ရုပ်နဲ့ဘဲ သတိထားမိခဲ့ကြပြီး သူမကိုယ်တိုင်ကလဲ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေမှာဆိုရင် ဗီလိန်အဖြ စ်တာများပါတယ်။ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အပိုင်နိုင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကလဲ သူမရဲ့ ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အနုပညာတစ်ခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟန်နီထွန်းဟာ […]
သေနတ်ပြပြီး ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ ကလေး အဖမ်းခံရ ဒီဖက် ခောတ်သစ်ကမ္ဘာရဲ့ ပြဿနာ တစ်ရပ်ပါ။ဒီလိုပြဿနာမျိုးက အရင်ကဆိုရင် ရပ်ထဲရွာထဲက လူကြီးတွေက နောက်မလုပ်အောင် ဆုံးမလိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားပါတယ်။ ဒီဖက်ခောတ်မှာကျတော့ အကဲဆတ်တဲ့မိဘတွေကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ရှုတ်ထွေးတဲ့ ကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကလေးတစ်ယောက်က ရာဇဝတ်မှု ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ကျူးလွန်ရင် နောင်ကျဉ်အောင် ရိုက်နှပ်ပြီး […]
ပါတော်မူတာ သီပေါမင်းအစစ် မဟုတ်ဘဲ စုဖုရားလတ်၏ လင်ငယ် ကြာကူလီကောင်သာ ဖြစ်တယ်”လို့ ဆိုလာတဲ့ အနွယ်တော်တစ်ဦး
ပါတော်မူတာ သီပေါမင်းအစစ် မဟုတ်ဘဲ. .စုဖုရားလတ်၏ လင်ငယ် ကြာကူလီကောင်သာ ဖြစ်တယ်”လို့ ဆိုလာတဲ့ အနွယ်တော်တစ်ဦး သီပေါမင်း ပါတော်မူခြင်းဟာ အားလုံးသိထားကြတဲ့အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ. .သီပေါမင်း အစစ်ဟာ တိုင်းတပါးသို့ လုံးဝ ပါတော်မမူခဲ့ဘူးလို့ မင်းမျိုးမင်းနွယ် အနွယ်တော်တစ်ဦးဆိုသူက ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကို အနွယ်တော်တစ်ဦး ဆိုသော နေမျိုးဦး […]
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ စာသင်ခန်းထဲက ကျောင်းသားစုံတွဲများဗွီယိုဖိုင်။
အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ စာသင်ခန်းထဲက ကျောင်းသားစုံတွဲများဗွီယိုဖိုင်။ တိုးတက်မှုနဲ့အတူ တစ်ဖက်မှာလည်း ဆုတ်ယုတ်မှုတွေအများကြီးပါ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပညာရေးစနစ်ဟာ အခုအချိန်ထိ နလံထဆန်ပြုတ်တိုက်နေရတဲ့ အနေအထားပဲရှိပါသေးတယ်။ အဖက်ဖက်က အားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့ ပညာရေး။ မိဘဖြစ်သူများမှာတော့ ကျောင်းတစ်မျိုး၊ ကျူရှင်တစ်ဖုံ ကိုယ့်သားသမီးလေးတွေ ပညာ တတ်ဖြစ်စေချင်လွန်းလို့ မစားရက်မသောက်ရက် ချွေးနည်းစာလေးနဲ့ကျောင်းထားကြတယ်။ ကျောင်းသားများကလည်း မသိတတ်။ […]
ဗစ်တိုးရီးယားလေးကို သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ ဝေဖန်လိုက်ပြန်တဲ့ မကွေးက ဆရာဝန်
ဗစ်တိုးရီးယားလေးကို သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ ဝေဖန်လိုက်ပြန်တဲ့ မကွေးက ဆရာဝန် ခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားအတွက် တရားမျှတမှုဆိုတာက ဟို ကလေးနှစ်ယောက်ကို ထောင်ကျစေချင်တာလား? တရားဥပဒေ ဆိုတာက လူတွေ အလျဉ်းသင့်သလိုချမှတ်ထားတဲ့ ပြစ်မှု ပြစ်ဒဏ် စည်းကမ်းတွေသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မှန်ချင်မှ မှန်မယ် တရားမျှတမှု ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ ဆိုတော့ […]
ရထားမှောက်အောင် သံလမ်းပေါ် သစ်တုံးနှင့် ကျောက်တုံး ချထားတဲ့ တရားခံကို မိပြီ
ရထားမှောက်အောင် သံလမ်းပေါ် သစ်တုံးနှင့် ကျောက်တုံး ချထားတဲ့ တရားခံကို မိပြီ ခင်ဦးမြို့မရဲစခန်း (ပ)၈၉/၂၀၂၀၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဥပဒေပုဒ်မ ၈၄ အမှုမှ တရားခံဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ မြစ်ကြီးနားမှ မန္တလေးသို့ မောင်းနှင်လာသည့် မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး၊ အမှတ်(၄၂) အစုန် လူစီးရထားသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက် နံနက် ၇ […]
ချိန်းတွေ့နေသော လူမိုက်စုံတွဲကို ဓားမြသွားတိုက်လို့ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသား နှစ်ဦး
ချိန်းတွေ့နေသော လူမိုက်စုံတွဲကို ဓားမြသွားတိုက်လို့ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသား နှစ်ဦး ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ညောင်ရွာ၊ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်း အနောက်ဘက်၌ ဖေဖေါ်ဝါရီ (၁၉)ရက်နေ့ (၇)နာရီခန့်က ချိန်းတွေ့နေသော စုံတွဲထံ ငွေနှင့်ဖုန်း တောင်းသည့် အမျိုးသား နှစ်ဦး အသတ်ခံရမှု ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရသည်။ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအနောက်ဘက် မောင်ထွန်းလမ်းဘေး […]
ယောကျာ်းလေးက ဆင်းရဲလို့ သူတို့သမီးနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုပြီး အတင်းလ်ိုက်ခွဲတဲ့ video
ယောကျာ်းလေးက ဆင်းရဲလို့ သူတို့သမီးနဲ့သဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုပြီး အတင်းလ်ိုက်ခွဲတဲ့ video မိဘတွေ သဘောမတူတဲ့ကြားက ဒီလောက်အထိ ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေကို မခွဲကြပါနဲ့လား… ဒီနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကို စိတ်မကောင်းစွာဖြင့်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ချစ်သူနှစ်ဦး ကို မိန်ကလေးရှင်မိဘများက သဘောမတူလို့ အတင်းခွဲကာ ခေါ်ယူနေရင်း ရုန်းရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ […]
ကျွန်တော်ရဲ့ ‘မင်္ဂလာဦးည’ က ဖြစ်ရပ်ကလေးပါ… နှစ်ဖက်မိဘ သဘောတူညီမှုနဲ့ အိမ်ထောင်ပြု ကြတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ လာသမျှလူတွေကို ပြုံးပြရတယ်။ သိသိမသိသိ နှုတ်ဆက်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြီး ပြီးသွားတယ်။ စိတ်မော၊ လူမောနဲ့ ။ငယ်သူငယ်ချင်း ယောကျာ်းတွေက ‘ခဲဖိုး’ တောင်းတယ်၊ငယ်သူငယ်ချင်း မိန်းကလေးတွေကတော့ ‘ရွှေကြိုး’ တားကြ […]